တ​နေ့​သောခါ …. တစ်​ခါက​ပေါ့….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တ​နေ့​သောခါ …. တစ်​ခါက​ပေါ့…..
တ​နေ့​သောခါ …. တစ်​ခါက​ပေါ့…..
Posted by မောင်ရိုး on Dec 22, 2013 in Creative Writing | 46 comments
လူကြီးဆိုတာ တခါတုန်းက လူငယ်​ပါပဲ …
ဒီလိုပါပဲ …. လူငယ်​ဆိုတာ တ​နေ့ကျရင်​ လူကြီးဘဝ ​ရောက်​ကို​ရောက်​ရပါလိမ့်​မည်​ ။
အိုခြင်း .. နာခြင်း… ​သေခြင်းတို့ကို မည်​သူ​ရှောင်​နိုင်​မည်​နည်း …။
“အလကားပါကွာ.. ဒီအဖိုးကြီး​ခေတ်​မမှီ​တော့ပါဘူး… နားစမ်းပါ ”
ထိုသို့​သောစကားတို့ကို ကျ​နော်​ငယ်​စဉ်​ကဆိုခဲ့ဖူးပါလိမ့်​မည် ။
ယခု​သော်​.. ထိုဝဋ်​တို့ ကျ​နော်​လည်​​တော့မည်​ထင်​၏ ။
ဘယ်​​သောအခါမှ ​ပျောက်​ကွယ်​မည်​မဟုတ်​ ။
အစဉ်​အဆက်​ ကွဲလွဲ​နေဦးမည်​သာ ။
နားလည်​​ပေးမှု ၊ သည်းခံခွင့်​လွှတ်​မှု ၊ အချင်းချင်းအပြန်​အလှန်​​လေးစားမှု … ထိုသို့​သော
ကြားခံ​ချောဆီ​လေးများရှိပါမှ​ အတန်​သင့်​အဆင်​​ပြေနိုင်​ပါလိမ့်​မည်​ ။
ကျ​နော်​တို့ နိုင်​ငံ၏မိရိုးဖလာ ထုံးစံသည်​ လူကြီးစကားကို လူငယ်​များအားနား​ထောင်​​စေချင်​​ပေသည်​ ။
ထို့​ကြောင့်​ … ပြန်​ခံမ​ပြောနဲ့ဟူ၍လည်း​ကောင်း ၊ လူကြီး​ပြောလျှင်​နား​ထောင်​ရမည်​ဟု လည်း​ကောင်း
တခါတရံ မကြာခဏ မှားတတ်​ပါသည်​ ။
ထို့​ကြောင့်​ … ကျ​နော်​ ငယ်​စဉ်​ကဤသို့ဆိုခဲ့ဖူးသည်​။
“​ရှေးလူကြီးစကား .. ၃ နဲ့စား .. ၊ ကျန်​တဲ့ တစ်​ဝက်​ ယုံရခက်​ …”
ယခု​သော်​ …. သား ၊သမီးတို့ပင်​ အလယ်​တန်း​ကျောင်းသူားအရွယ်​သို့​ရောက်​​နေ​လေပြီ ။
ကျ​နော်​သည်​လည်း သက်​လတ်​ပိုင်းကိုစတင်​​ကျော်​ဖြတ်​ပြီး ဇရာ၏ ​ရှေ့​ပြေးပုံရိပ်​တို့ကို​တွေ့​နေရပါပြီ ။
​ရောဂါ​ပေါင်းစုံတို့၏ အလုပ်​​လျောက်​လွှာများကား …
အလုအယက်​ သူ့ထက်​ငါ ဒစ်​စ​ကောင့်​ချ​နေ​လေပြီ ။
ပြတင်း​ပေါက်​မှ လက်​ပြနှု​တ်​ဆက်​တတ်​သည်​ ။
ကျ​နော်​ ပြန်​ချိန်​​ရောက်​လျှင်​ တံခါးဝမှာ​စောင့်​​နေတတ်​ပြန်​သည်​ ။
မပီကလာပီကလာဖြင့်​ ​” ​ဝေးးးးး…
အရုတ်​ကပန်​လာဘီ ” (အလုပ်​ကပြန်​လာပြီ)
ထိုသို့ ​အော်​ရင်း​ပြေးဖက်​တတ်​သည်​ ။
ယခု… ထိုသို့မဟုတ်​​တော့ပြီ ။
​ကျောင်း.. ကျူရှင်​ .. သင်​တန်း .. သူလည်း လူ့ဘဝထဲဝင်​ဖို့ ​လေ့​ကျင့်​​ရေးဆင်း​နေပြီပဲ..။
ကျ​နော့်​ကို ​စောင့်​ကြို​သောသူသည်​ သမီးမဟုတ်​​တော့ပါ ။
ကျ​နော်​သားက တံခါးဖွင့်​​ပေးသည်​ ။
ကျ​နော်​အပြင်​သွားလျှင်​ ဝရံတာမှမျက်​စိတဆုံးကြည့်​​နေတတ်​သည်​ ။
ညဖက်​ ၉ နာရီ​ကျော်​လို့မှ ပြန်​မ​ရောက်​လျှင်​ ဖုန်းတဂွမ်​ဂွမ်​ဆက်​သည်​ ။
ကျ​နော်​ပြန်​မလာမခြင်း သူမအိပ်​ပဲ ​စောင့်​​နေတတ်​သည်​ ။
ယခုအချိန်​တွင်​ ထိုသို့အ​ခြေအ​နေပင်​ဖြစ်​သည်​ ။
သို့​သော်​ …. ​နောင်​နှစ်​​ပေါင်း ၂၀ ခန့်​အကြာတွင်​မူ …..
တုန်​တုန်​ရီရီဖြင့်​ ​သော့​ပေါက်​ထဲသို့ ​သော့​ချောင်းကိုမမြင်​မစမ်းထိုး​နေ​သော အ​ရေတွန့်​​နေ​သော
အ​နွေးထည်​အထပ်​ထပ်​ဖြင့်​ ချမ်းတတ်​​နေ​သော ချိနဲ့နဲ့ လူကြီးတစ်​​ယောက်​ …………..
သား၊သမီးတို့အလုပ်​ကအပြန်​ကို နာရီကြည့်​ပြီး​မျှော်​​နေတတ်​သည့်​ အဖိုးအို…….
​သား အပြန်​ကိုမအိပ်​​သေးဘဲ​စောင့်​​နေတတ်​တဲ့ လူအိုကြီးတစ်​​ယောက်​ …..
“ဟာ…အ​ဖေ မအိပ်​​သေးဘူးလား … မ​စောင့်နေနဲ့လို့​ပြောထားသားပဲ … ”
တချိန်​က… သူ​ပြောခဲ့ဖူး​သော ဝါကျတချို့ကိုခံယူရင်း…..
တချိန်​က ကားလမ်းကူးလျှင်​ သားကိုလက်​ဆွဲပြီး ခတ်​သွက်​သွက်​ ကူးခဲ့ဖူးသည်​ ။
ယခု …. ​နှေးတုန့်​တုန့်​ဖြစ်​​နေ​သော သူ့ကို သားကဆွဲ၍ကူး​ပေး​သည်​ ။
ယခင်​က သူ့အပြန်​ကို ​ချောင်းကြည့်​​ပေါက်​​လေးမှသားက ကြည့်​ပြီး
ယခု .. သူ အဲဒီအ​ပေါက်​ကို ​ခြေသံကြားတိုင်း​ချောင်းကြည့်​​နေတတ်​​လေပြီ ။
သား ​လုပ်​​နေ​သော အလုပ်​​တွေကို သူနားလည်​ခဲ့​သော်​လည်း
ယခု … သားက သူ့ကိုအနား​ပေးထားခဲ့သည်​ ။
​ခေတ်​​တွေ ​ပြောင်းပြီမို့ … အ​ဟောင်းတို့ လွင့်​ရ​ပေ​တော့မည်​ ။
​ရော်​ဝါရွက်​သည်​ … ​မြေမှာသက်​ဖို့ ဆင်းရပြီ ။
တချက်​တချက်​ ပင်​ယံထက်​က ဖူငုံရွက်​နု​လေးများကိုကြည့်​ရင်း …
အားကျ​​ကောင်း အားကျ​နေပါလိမ့်​မည်​ ။
သို့မဟုတ်​ …. တ​နေ့ ဒို့လိုပဲ ဆင်း​ပေးရမှာပါလားဟု သံ​ဝေဂ
ယူ​နေမည်​လား.. မ​ပြောတတ်​ပါ ။
မှုန်​​ဝေ တုန်​ရီ​နေ​သော အဖိုးအိုတစ်​​ယောက်​၏ အိမ်​မက်​မြစ်​သည်​
ခမ်း​ခြောက်​ခဲ့သည်​မှာ ကြာ​လေပြီ ။
ပြီးခဲ့​သော အတိတ်​တို့ကိုသာတမ်းတခြင်း​ဖြင့်​ အားပြုရရှာ​လေသည်​ ။
“အ​ဖေတို့ဘာမှနားမလည်​ပါဘူး….. ​ခေတ်​မတူ​တော့ဘူးဗျ ”
” ဟာ … … အ​ဖေ… ကျ​နော့ကိုထမင်းစားမ​စောင့်​နဲ့​လေ… ကျ​နော်​အလှုပ်​အရမ်းရှုပ်​တယ်​ဗျာ .. ”
” ကိုယ့်​ဟာကိုယ်​​အေး​အေး​နေပါဗျာ …. ဒီ​ခေတ်​ကိုအ​ဖေတို့နားမလည်​ပါဘူး ..”
” ​ရှေးလူကြီးစကား.. ၃ နဲ့စား .. ကျန်​တဲ့တစ်​ဝက်​..
ယုံရခက်​ … ”
ကျ​နော့်သားက ဒီလိုများ​ပြော​နေမလား .. ?
ကျ​နော်​ … ခံနိုင်​ရည်​ရှိပါ့မလား …?
ကျ​နော်​ ဒီည​နေ အိမ်​ပြန်​ရင်​ သားကို​ပြောပြရဦးမယ်​ ……
… ” သား​ရေ… မင်းအခု​ဖေ​ဖေ့ကို ရပ်​​စောင့်​ပြီး တံခါးဖွင့်​​ပေးတဲ့
​နေရာ​လေးမှာ .. ​နောင်​နှစ်​​ပေါင်း ၂၀ ​ကျော်​ရင်​ ….
​ဖေ​ဖေ​စောင့်​ပြီး ဖွင့်​​ပေးရမှာပါ…… လို့ …. “……
လူငယ်ဆိုတာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့် လူကြီး
လူကြီးဆိုတာ အရင်တစ်ချိန်က လူငယ်
ဒဿန အတွေးတွေ တဝေဝေနဲ့ ဖတ်လိုက်ရလို့
လက်မ ထောင်လိုက်ပါတယ် ခည
ကျ​နော်​တို့ ​တွေ့ကြုံ​နေရတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း​တွေမှာ အဲဒါလို​နေတာပါ ။
Every relationship need/must have “Respect for Each Others”
ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလ၊ ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ၊ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်
ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး တဲ့
လူကြီးတွေ လူငယ်တွေကို နားလည်ပေးကြပါ။ နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါ။
လူငယ်တွေ တစ်ဖက်ကနေ လှည့်တွေးကြပါ။ လူကြီးတွေကို ချဉ်းကပ်ပါ။
လူငယ်လူကြီး အမြင်မတူတာကို ငြင်းနေကြမယ့်အစား အထင်သေးနေကြမယ့်အစား
လူကြီးတွေရဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှု အားကို
လူငယ်တွေရဲ့ တက်ကြွတဲ့ အားမာန်နဲ့ ပေါင်းပေးလိုက်ချင်တယ်။
မတူတာကို ခဏထား နားလည်မှုကို အရင်ဆောက်ကြရင်ကောင်းမယ်နော်……..
အခုလည်း လူငယ်​မက လူကြီးမကျဆို​တော့..ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်းပါပဲ
​သေချာတာက​တော့… ဘယ်​​တော့မှ​ ပြန်​မငယ်​​တော့ဘူး​ဟေ့…
အခုလို ကြို​တွေးထားတာ ပို​ကောင်းမယ်​ထင်​တယ်​​လေ…
Aye Chan Mon’s photo.
မိဘတွေကို မပြောသင့်တဲ့ စကား(၁ဝ)ခွန်း လူတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘတွေကို အောက်ကစကားဆယ်ခွန်းထဲက တစ်ခွန်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ခွန်းထက်ပိုပြောခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သားသမီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က မိဘတွေကို ဒီစကားတွေကိုထပ်မပြောတော့ဘဲ နားလည်ပေးကြရအောင်.. လူ့ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နံဘေးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ချစ်သူခင်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားမှ သူတို့က သင့်ဘဝမှာ ဘယ်လောက်အရေးပါကြောင်း သိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ မိဘတွေကို ရိုသေလေးစားပါ။ သင်ဘာအမှားပဲလုပ်လုပ် သူတို့က သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ မိဘရဲ့ရင်ခွင်ဟာ သင့်အတွက် လေငြိမ်ရာအရပ် ထာဝရနားခိုရာဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အင်းပါ! အင်းပါ! သိပြီ… အရမ်းရှုပ်တာပဲ! (၂) ကိစ္စရှိသေးလား? မရှိရင် ဖုန်းချတော့မယ်! (မိဘတွေဖုန်းဆက်တာ စကားပြောချင်ရုံသက်သက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းကိုချဖို့ပဲ မလောပါနဲ့) (၃) ပြောရင်လည်း နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မမေးပါနဲ့တော့! (၄) မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထပ်ထပ်ပြောထားရက်သားနဲ့….. လုပ်ထားတာတွေကလည်း မကောင်းဘူး။ (သူတို့အင်အားနဲ့မမျှတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က ဂရုတစိုက်နဲ့ သူတို့ကိုမလုပ်ဖို့တားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ သူတို့အသုံးမဝင်တော့ကြောင်း သူတို့ကိုခံစားစေပါတယ်) (၅) ဟာ.. ဖေဖေ၊ မေမေတို့နည်းက ခေတ်တုံးနေပြီ။ (မိဘတွေရဲ့အကြံဉာဏ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အသုံးတည့်ချင်မှ တည့်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့စကားကို ကျွန်တော်တို့ပြောသင့်ပါတယ်) (၆) သားအခန်းကို မရှင်းပါနဲ့လို့ ပြောထားရက်နဲ့ အခုတော့ကြည့် ပစ္စည်းတွေရှာမတွေ့တော့ဘူး။ (ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်တိုင်ရှင်းတာက ကောင်းပါတယ်။ မရှင်းချင်ရင် သူတို့ရဲ့စေတနာကိုတော့ မစော်ကားပါနဲ့) (၇) သားဘာစားမယ်ဆိုတာ သားသိတယ်။ ဟင်းတွေ ထည့်ထည့်မပေးနဲ့တော့! (ကျွန်တော်တို့အပြန်ကို စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့မေတ္တာ၊ သူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့အတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေထဲ ထည့်ချက်ထားကြတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ရုံပါပဲ) (၈) ဒီဟင်းကျန်တွေကို မစားပါနဲ့လို့ မှာထားရက်နဲ့ စကားကိုနားမထောင်ဘူး! (သူတို့ရဲ့ တစ်သက်ချွေတာလာတဲ့အကျင့်တွေ ပြောင်းလဲရခက်ပါတယ်။ ဟင်းချက်ရင် တစ်နပ်စာချက်ဖို့ အကြံပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်) (၉) သား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချင့်ချိန်ပြီး လုပ်တတ်တယ်။ တဗျစ်တောက်တောက် မပြောနဲ့ .. နားကိုငြီးတယ်။ (၁ဝ) ဒီပစ္စည်းတွေ မယူတော့ပါဘူးဆို ဘာဖြစ်လို့ ဒီမှာပုံထားရသေးတာလဲ! (မိဘတွေက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အရာတွေကို သိမ်းထားချင်တတ်ကြတယ်။ သူတို့သိမ်းထားတာတွေ တစ်အိမ်လုံးပြည့်နေပါစေ… နောင်တချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝက ဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ့မိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာကြည်နူးကြဦးမယ် မဟုတ်ပါလား! ) မူရင်းရေးသားသူကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။လွင်သန္တာစိုး Aye Chan Mon# Credit To>လွင်သန္တာစိုး လွင်သန္တာစိုး <ပြန်လည်မျဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဦးဆာမိက မယုံရင် ပုံပြင်မှတ် ဆိုပေငြားးး
တစ်နေ့မှာ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း
မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံလာ ဦးမှာပါလားဟု ယုံကြည်ပါတယ်။
အမှန် တော့ ဖြတ် သန်း မူ့ ကွာ လျင် အ တွေး ကွာ ပါ သည်။
အပြန် အလှန် အပြစ် ပြော နေ မည့် အ စား
မောင်သာရ ပြော ခဲ့ သလို
သူ့ဘက်က နည်းနည်းလျော့ ကိုယ့် ဘက် က နည်း နည်းလျော့ ကြ လျင် အဆင်ပြေ မည် ထင်ပါသည်
အ​တွေး ကွာတာက​တော့ အခုကတည်းကအစ်​ကို​ရေ…
တခါတ​လေ ကျ​နော်​​ပြောတာ​တွေကို သားက ပြန်​ပြီး ​မေးခွန်းထုတ်​​နေတာ​လေ
မနက် အာရုံတက်နေထွက်သည့်အချိန်ဆိုတာ နေ့တိုင်းရှိသည်။
ထိုအတူ ညနေဆည်းဆာနေ၀င်သည့်အချိန်ဆိုတာလည်း နေ့တိုင်းရှိပါသည်။
အာရုံတက်နေအထွက်ဟာ နေခြည်တွေတဖြေးဖြေးဖြာကာ အလင်းအားတွေဖြန့်ကျက်ပြီး လောကတခွင်သို့ လင်းစေခဲ့ပေမယ့် ဆည်းဆာနေ၀င်ချိန်ကတော့ အလင်းရောင်လေးများ တဖြေးဖြေးဖျော့လျှော့ကွယ်ပျောက် သွားတဲ့သဘောတရားကလည်း အမြဲရှိနေသည့် သဘာဝတရားပါ။
ကျွန်တော်တို့တွေ ဆည်းဆာနေ၀င်ချိန်လေးကို လှသည်ထက်လှအောင် ချယ်မှုန်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် သဘာဝတရားကို အံတုနိုင်မယ်ထင်။
တစ်နေ့သော အခါမှာတော့ ..
ဒီလမ်းဟာ ဒီလမ်းပေါ့ ဥဥဆာ ရယ် …
ဒီလမ်းဟာ စမ်းရေလို အေးမြတဲ့ လမ်းလေးသာ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့
အတိုင်းထက် အလွန်ပေါ့ ခညာ
အဆိူးဆုံးအတွက်​ခံနိုင်​ရည်​လည်းရှိပါ့မလား ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ အယုံရဲဘူး..
​အော်​…… သံသရာ… တဝှီးဝှီးနဲ့ကိုလည်​​နေတတ်​ပါလား…
မျက်မှန်လေးကိုပဲ တံခါးဖွင့်ပေးရမလား… အဘိုးအိုက တစ်အိမ်..မျက်မှန်လေးက သူ့မိသားစုနဲ့ တစ်အိမ်များ ဖြစ်နေမလား..
10 နှစ်သားတုန်းက အဖေနဲ့အမေက ..ကြောက်ချာကြီး ( တုတ်နဲ့သမလို့ )
20 နှစ်သားတုန်းက အဖေနဲ့အမေက ..နည်းနည်းပွက်တယ်…ကဂျီကကြောင်အတော်နိုင်တယ်…
30 နှစ်သားကျတော့ …အဖေနဲ့အမေ …အနားမှာမနေရတာကိုက ငရဲ ….
၄၀ ​ရောက်​ရင်​ နဲနဲစပြီးကိုယ်​ချင်းစာတတ်​လာလိမ်​မယ်​
၅၀ ဆိုရင်​ ​တော်​​တော်​​လေး ​နောင်​တရ​နေတတ်​ပြီ
၆ ၀ မှာ စပြီးအထီးကျန်တော့မယ်ထင်ရဲ့
ကိုယ်လိုသားသမီးမျိုးတော့ မရချင်တာအမှန်ဘဲ ဆာဆာရယ်….
တိဝူး… တိဝူး.. အပျိုဂျီးကို ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ…
​နောင်​နှစ်​​ပေါင်း ၃၀ ခန့်​ကြာ​သော်​……….
“” ကြီးကြီး​ရေ …. တံခါး​တွေ​သေချာပိတ်​​နော်​… ​သော့ခတ်​ဖို့လည်းမ​မေ့နဲ့ …မီး​တွေဖွင့်​ပြီးရင်​ပြန်​ပိတ်​​နော်​….
အိမ်​ထဲမှာပဲ ​ကောင်း​ကောင်း​နေ​နော်​ ….””
ဟိုဘက်အိမ်က သား သူငယ်ချင်း ကောင်လေးကို လည်း သွားသွား ရှိတ် မနေနဲ့ဆိုတာရော မှာရမယ်။
ဂျီး ဝါး ကို စိတ်မချနဲ့လို့။
အံမယ်…အံမယ်…တူလည်း အတူတူဘဲဟာဂို….. ခပ်တည်တည်နဲ့… မမဂျီးကတော့
သူ့ဂျီးဝါး ထိတော့ မခံနိုင်ဘူး နာ့ ကို ပြန်ပြောတာ၊။
ဘယ်ခံမလဲ ဗုံကလေးရဲ့လေဖြတ်နေတဲ့အူးလေးနဲ့ စေ့စပ်ထားဒါလေ…
တစ်ခုခု ပြောလိုက်ရင် ရင်ထဲက အရှိန်လေးတွေ ပျော့သွားမှာ စိုးလို့
“ဟတ်ထိတယ်” ဆိုတာလေးပဲ ပြောချင်တော့တယ် ဆရာဆာ ရေ
အခုမှ ​နေထိုင်​မ​ကောင်းဖြစ်​ရင်း ​ရောက်​တတ်​ရာရာဟို​ရေးဒီ​ရေးလုပ်​လိုက်​တာ …
ကျ​နော်​တို့ရဲ့မိဘ​တွေက​တော့ အခုချိန်​မှာ ကျ​နော်​တို့အိမ်​အပြန်​ကို​မျှော်​​နေရပြီ​ပေါ့…
ကျ​နော်​တို့လည်း ..​နောင်​နှစ်​အပိုင်​အခြားတစ်​ခု​ရောက်​ရင်​ …….
ဦးဆာရေ.. အရေးအသားကတော့ လူကိုကွက်တိထိတာပဲ.. :))
ဟိုနေ့က ရွာကွတ်ပစ်မှာတွေ့တာ အန်တီသဲကတော်တော်နုတယ်ဆိုပဲ…
ဒါမှ လူကြီးဘဝကိုပိုနားလည်ပေးနိုင်မှာပါ ။
ဖေဖေမေမေကအဲ့အရွယ်မရောက်သေးလို့ အဲလိုမဆက်ဆံမိပေမယ့် ဘွားဘွားရှိတုန်းကတော့ နားလေးတဲ့အဘွားအိုကို မေးတာတွေစိတ်မရှည်တာရှိဖူးတယ်။ဒါပေမယ့် သေခါနီးအလူးအလဲအချိန်
နောက်ဖေးဝတ်တွေကအစ ကိုယ်တိုင်လျှော်ပေး သန့်ရှင်းပေးခဲ့ရလို့ကျေနပ်မိပါတယ်။
လောကမှာ သနားကိုယ်ချင်းအစာမိဆုံးက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးလေးတွေပါ။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့တွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြီးလို့ကြီးတာ ကျလို့ကျတာကို သတိမမူပဲ ငါတကောကောတတ်၊မာန်တတ်တတ်နေပြီး သေချိန်ကျမှ ဘုံးခနဲကျသွားတတ်တာမျိုးတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်။
ဒါမျိုးက မသေခင်ကာလအထိ ဒေါသ၊မောဟ၊မာန်မာနတွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့မနှစ်မြို့မှုကိုခံယူပြီးမှ
လို့ထင်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် ထပ်တူမကျနိုင်ပေမဲ့
ကျတော်ကတော့ သား နှစ်ယောက်ရှိတယ်။
သူတို့နဲ့ အတူ စဉ်းစားတယ်။လူပ်ရှားတယ်။ ထပ်တူဖြစ်အောင်နေတယ်။
ဒီတော့ သူတို့ဘာလိုချင်တယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဘာလုပ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုး ကျတော်နားလည် လာတယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကျတော်ဘာမကြိုက်ဘူး ဘာဖြစ်စေချင်တယ် ဘယ်လို စီမံထားသလဲ သူတို့သိတယ်။
ဒီတော့ ကိစ္စတိုင်းနီးနီး သိပ်မညှိရတော့ဘူး။
သားသမီးများနဲ့ အနီးကပ် (စိတ်ချင်းပါ)နေဖို့အချိန်ပေးပါ။
က​လေး​တွေကို အတင်း အဓမ္မ ပုံသွင်းမယ့်​အစား
လိုချင်​တဲ့ပုံစံဝင်​​အောင်​ ပုံ​ဖော်​တာပိုသ​ဘောကျပါတယ်​ ။
ဆို​တော့….. ကိုမင်းမင်းရဲ့ နည်းလမ်းများဟာ သင့်​​တော်​လှ​ကြောင်းပါ ။
ပြီး​တော့ … တခါတရံ စိတ်​ပျိုကိုယ်​နုဆိုတာ​လေးလည်း ​ထောက်​ခံပါ​ကြောင်း
အဲလိုမျိုး မိဘနဲ့သားသမီး မကျေမလည်ဖြစ်ရတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရန်တကျက်ကျက် ဖြစ်ရတာလည်း ကောင်းတာပဲ။ တကယ်က ဒီ့ထက် ဆိုးရွားတဲ့နည်းလမ်း ရှိသေးတယ်။ အေးစက်သွားတာလေ။ အဲဒါမျိုးကျ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားမယ်။ အေးစက်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဦးဆာရဲ့ပို့်စ်ကိုဖတ်ပြီး သံဝေဂရတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မပြုပြင်နိုင်ဘူး။ ဘ၀မှာ မိဘက ကိုယ့်ကို အစိုးမိုးအခြယ်လှယ်နိုင်ခဲ့ဆုံး။ ကောင်းကျိုးရော ဆိုးကျိုးရော သူမတူအောင် ပေးခဲ့တဲ့လူတွေ။ တစ်ခါတလေ ပဲပြုတ်သယ် သားသမီးဖြစ်ချင်တယ်။ ခေါင်းရွက်ဖျပ်ထိုး ဈေးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးဖြစ်ချင်တယ်။ တကယ့် အညတရ စစ်စစ်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဈေးထဲမှာ ထမီစွန်တောင်ဆွဲပြီး ရန်ဖြစ်ရဲတဲ့လူ ဖြစ်ချင်တယ်။ ၀ုန်းဒိုင်း ၀ုန်းဒိုင်းလုပ်မယ်။ ငိုချင်စရာရှိရင် ၀က်ဝက်ကွဲအောင် ငိုပစ်လိုက်မယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို မလုပ်နိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ချုပ် ထားတဲ့အရာတွေဟာ ဘာတွေလဲ။ တကယ်ကို တွေးစရာတွေ အများကြီးပေးတဲ့ ပို့စ်ပါ ဦးဆာရေ။
ဆရာမ မပြုံးခင်​ဗျာ …
မိဘနဲ့သားသမီးဖြစ်​ဖြစ်​ အဆိုးဆုံးအ​ခြေအ​နေပါ ။
အသက်​ကြီးသွားရင်​ လူကြီးနဲ့က​လေးဟာအတူတူပဲဖြစ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​ ။
က​လေးအတွက်​ အနာဂါတ်​ဆိုတာ စိတ်​ကူးယဉ်​လို့ရ​ပေမယ့်​…
အဲဒီ အချိန်ဆိုတဲ့ လမ်းကလေးဟာ လူတိုင်းလျှောက်ရမှာ…
တစ်နှစ်လျှောက်တော့ ခံစားမှုတမျိုးနဲ့ ….
အဲဒီလမ်းကလေးမှာ ….အလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ ကိုဆာရေ..
ဒိလို စာလေးတွေ သိပ်ကြိုက်တယ်…။
မအားလပ်​တဲ့ကြားက လာ​ရောက်​ဖတ်​ရှု​ပေးတာ​ကျေးဇူးပါဗျာ ။
အသက်​အရွယ်​၊အချိန်​အခါနဲ့ ၊ ပတ်​ဝန်းကျင်​ဟာ တကယ်​ပဲ အလှည့်​အ​ပြောင်း​တွေဖြစ်​​စေခဲ့တာပါ.။
ကျ​နော်​ အသက်​၂၀ ​လောက်​ကဖတ်​ဖူးခဲ့တဲ့စာအုပ်​တစ်​အုပ်​ကို
အခုပြန်​ဖတ်​​တော့… အ​တွေး​တွေ ခံစားမှု​တွေမတူ​တော့ဘူးဗျို့ ….
မိန်းမယူနဲ့ဗျ၊ ယူလည်း ခလေးမမွေးနဲ့ဗျ… ဒါဆို အဲဒီ ဒွတ်ခ တွေ့စရာ အလိုဗူး.. ယနေ့လည်း လူငယ်၊ နောင်ဝယ်လည်း လူငယ်၊ သေသည်အထိ လူငယ်ဗဲ.. ရဗူး.. အလျှော့နိုင်ဗူး…။ ဟေ့ကြောင်ကြီး အသက် ၂၁နှစ်ကွ…. ခွစ်စတယ်လေးကရော အဘောက်ရဲ…
ကိုဆာမိရေ ကျွန်တော်လည်း ဇရာထောင်းလာတော့ ခင်ဗျားလိုဘဲတွေးမိတယ်
ကျောက်စ်မှာ အခုအချိန် အဖေသာရှိသေးရင်လို့ တွေးမိတာ ခဏခဏပဲ…
ဒီတစ်​သက်​​တော့ ၊ ဦး​ကြောင်​လက်​​လျော့
တခါတ​လေ … ဇတ်​ဆရာအလိုကျ​ပေါ့ဗျာ…
စွမ်းနိုင်​တဲ့​နေ့ ​ရောက်​ခဲ့ရင်​သာ ……
ကိုယ့်​ အ​ဖေဖြစ်​လာ​တော့မှ .. ကိုယ့်​အ​ဖေကို ပြန်​ပီး ကိုယ်​ချင်းစာမိတာ
“” ကိုယ့်​ဟာကိုယ်​​အေး​အေး​နေပါဗျာ …. ဒီ​ခေတ်​ကိုအ​ဖေတို့နားမလည်​ပါဘူး ..””
အဲဒီလိုတော့ ကျုပ်အဖေ အမေတို့ကို ကျုပ်မပြောဖူးခဲ့တာအမှန်ပါ…သူတို့နားမလည်တာရှိရင်
ကျုပ်သားသမီးတွေ လက်ထက်ကျရင်တော့ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆက်ဆံကြမယ်မသိ…
ဘာဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်နားလည်ပေးနိုင်ဖို့တော့ ပြင်ထားပါတယ် ကိုရင်ဆာရေ
ကျနော်လည်းအခုမှဦးမိုက်ကွန်မန့်ကို မေးလ်ထဲမှာတွေ့လို့ရီပလိုင်းလုပ်ရတာ ဟားး ဟား ………
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သိပ်မအိုသွားသေးခင်တော့ ရိပ်သာလေးတစ်ခုလောက်ရှာထားဦးမှပါလေ ။
ခေတ်ကာလမတူတော့ လူကြီးလူငယ် ပဋိပက္ခတွေက အမြဲရှိနေတတ်တာဆိုတော့
ကာလတစ်ခုမှာ အသုံးအဝင်ဆုံး အရေးအပါဆုံး မရှိမဖြစ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လဲ
ကာလတစ်ခုမှာတော့ သင့်တော်တဲ့သူတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုကို ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံရမှာဘဲမဟုတ်လားဗျာ ။
ကျွန်တော် မဖတ်ရသေးတဲ့ ပို့စ်ကောင်းတခုပဲ ဗျ… ဦးလေးကြီးကို သဘောကျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဦးလေးကြီးက ပို့စ်အဟောင်းတွေ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေသလိုပဲ…
အမှန်ပြောရရင် အရင်အချိန်တုန်းနဲ့ အခုအချိန်က အတော်ကွာခြားနေပြီနော်
လူငယ်လူကြီးတောင် အမြင်မတူတာတွေ ပိုများလာသလို နောင်ဝယ်မှာ အတော် ဝေးကွာလာလေမလား
မနောတို့လည်း လူကြီးအရွယ်ရောက်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့ စဉ်းစားနေတုန်း
ခုမှ ကျောင်းစတက်နေတဲ့ တူမလေးက စကားပြောရင် ကြီးကြီးက ဘာသိလို့လဲဆိုတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်း တွင်တွင်သုံးနေပါရောလား….
ခု​လော​လောဆယ်​​တွေ့​နေရတာက အသက်​​တော်​​တော်​ကြီးတဲ့သူ​တွေနဲ့ ​တွေ့ရင်​ စကား​တော်​​တော်​နဲ့ အမျှင်​မပြတ်​တတ်​ ။ သူတို့မှာ ​ပြောစရာ လူမရှိ​တော့ဘူး​လေး ။ လူငယ်​​တွေက သူတို့​ပြောမဲ့ ​ရှေး​ဟောင်း​နှေင်းဖြစ်​ ​တွေကိုစိတ်​မ၀င်​စား​တော့ အားနာပါးနာ နား​ထောင်​​ပေးတဲ့ ​နေ၀န်းနီ နဲ့​တွေ့ရင်​ မနားတမ်း​ပြော​တော့တာ ။ ​နေ၀န်းနီ ဆိုတဲ့ သူ​တောင့်​သား ကလည်း တစ်​မျိုး ။ စိတ်​လက်​ကြည်​သာရှိရင်​သာ ​ပြောချင်​သ​လောက်​​ပြောကြစမ်းပ​စေ ။ ဆိုပြီးနား​ထောင်​​ပေးတာ ။ တစ်​ခါတစ်​​လေ သိစိတ်​နဲ့ မသိစိတ်​ ကိုယ်​တွင်း ရန်​ဖြစ်​​​နေတဲ့ အခါများ ဆို စကား လာ​ပြောမဲ့ သူမြင်​ရင်​ ​ဝေး​ဝေးက ​ရှောင်​​ပြေးမိ ။ ​နောက်​မှ ပြန်​စဉ်းစားမိတာ ။ ငါ​ကော သူတို့ အရွယ်​​ရောက်​ရင်​ ငါ​ပြောမဲ့စကား အားနားပါးနာ နား​ထောင်​​ပေးမည့်​သူ​ကော ရှိပါ့မလား လို့ ။ အဲ့သလို ​တွေးမိရင်​ ​စော​စောက ​ရှောင်​​ပြေးမိတာ ​ကျေကွဲသလိုလို ​နောင်​တ ရသလိုလို ။